उपेन्द्र यादवको भविष्यवाणी मिलेपछि प्रचण्ड चिन्तित ! - Dainik Nepal
उपेन्द्र यादवको भविष्यवाणी मिलेपछि प्रचण्ड चिन्तित !
दैनिक नेपाल २०७४ वैशाख ७ गते १५:२२
काठमाडौं, ७ वैशाख । संघीय समाजबादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि भनेको कुरा एक–एक गरेर मिल्दै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिन्तित बनेका छन् ।
यादवले करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतको उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्य मन्त्री हुने, नेपालको मधेशी दल आन्दोलनमा जाने, राप्रपा हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै आन्दोलनमा जाने लगायका कुरा मिल्दै गएपछि प्रचण्ड चिन्तित बनेका हुन् ।
यस्तो छ उपेन्द्र यादवले सुनाएको भविष्यवाणी
उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतको उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी बढारिनेछ, बिजेपीको बहुमत हुनेछ र त्यहाँको मुख्यमन्त्री योगी अदित्यनाथ हुनेछन, मधेशमा बैशाखदेखि आन्दोलन शुरु हुनेछ, डा.बाबुराम भट्टराई पनि आन्दोलनमा आउनेछन् र हिन्दुराज्यको माग गर्दै राप्रपाले पनि आन्दोलन गर्नेछ भनेका थिए । यो कुरा प्रचण्डले पार्टीको आन्तरिक वैठकमा सुनाएका हुन् ।
भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा योगी आदित्यनाथ चैत ६ गते नियुक्त भएका थिए । तर, त्यसअघि राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा र श्रीकान्त शर्माको चर्चा निकै भएपनि थियो ।
प्रचण्डले पछिल्लो बैठकमा सुनाए अनुसार उपेन्द्र यादवले आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशको मुख्य मन्त्री बन्दैछन् भन्ने त्यसबेला पत्याएका थिएनन् ।
प्रचण्ड अहिले यसकारण झस्किएका छन कि, त्यसदिन उपेन्द्रले भनेको कुरा एक–एक गरेर अगाडि आएका छन् । प्रचण्डले आफ्ना पार्टी बैठकमा सुनाएका रहेछन, ‘उपेन्द्रजीले भनेको कुरा फटाफट मिलेको छ । यसो हेर्दा अहिलेका घटनाक्रम कतै पूर्वनिर्धारित त थिएनन् भन्ने शंका बढेको छ ।’
मधेशी मोर्चाले बैशाख ५ गतेदेखि आन्दोलन शुरु गरिसके । नयाँ शक्ति पनि आन्दोलनमा छ । राप्रपाले पनि पार्टी विधान निर्वाचन आयोगले हेरफेर गरेको भनेर विरोध जनाइरहेको छ ।
बालुवाटार बैठकमा पनि चर्चा
यता बुधबार (हिजो) बालुवाटारमा बसेको प्रमुख पाँच दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रले गरेको भविष्यवाणीको चर्चा गरेका छन् ।
‘उपेन्द्रजीले अब (भारतको) उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री हुन्छन् भनेका थिए । त्यतिबेला आदित्यनाथको चर्चासम्म पनि थिएन । भारतमा समेत अरुकै चर्चा थियो । तर उपेन्द्रजीले भनेको मिल्यो,’ प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘संविधान संशोधन दर्ता गर्ने बेला पनि बैशाखमा हावाहुरी आउँछ भनेका थिए । भनेजस्तै भयो मोर्चाले संशोधनमा सहमति जनायो । अस्वीकार मात्र गरेन, आन्दोलनको घोषणा गर्यो । राप्रपा पनि आन्दोलनमा गइरहेको छ । बाबुराम भट्टराईको पार्टी पनि आन्दोलनमा मिसिएको छ । थारुहरु पनि आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् । उपेन्द्र जीले बैशाखमा हावा हुण्डरी आउँछ भन्नु भएको थियो । हो कि क्या हो ?’
यो कुरा सुनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले कावा अध्यक्ष वामदेव गौतम, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार आश्चर्यमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने– ‘मैले उपेन्द्रको तागत छ भन्न खोजेको हैन । तर अहिले पनि पुग्न आँट्यो । हावा हुण्डरी आउँछ कि क्या हो ?’